Daawo Muuqalka”Qoraaga Xasan Cabdi Madar Oo Soo Saarey Buugii Uu Xilka Ku Waayey Oo Ka Hadlaya Taariikhdii Hogaameed Ee Marxuum Madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal | Berberatoday.com
Daawo Muuqalka”Qoraaga Xasan Cabdi Madar Oo Soo Saarey Buugii Uu Xilka Ku Waayey Oo Ka Hadlaya Taariikhdii Hogaameed Ee Marxuum Madaxweyne Maxamed Xaaji Ibraahim Cigaal
Hargeysa(Berberatoday.com)-Qoraaga weyn( alla weyne ) Xasan Cabdi Madar ayaa soo saarey kuna soo bandhigey madal ilyartu isqabatay buug uu ka qoray Marxuum Maxamed xaaji ibraahin Cigaal oo ah Haldoorka Madaxweynayaasha soo marey somaliland ama noqdeyba oon la heyn wali wax gaadha halkuu gadhsiiyey iskoorka.
Hadaba Xasan Cabdi madar Maxaa xilkii Agaasimaha madaxtooyada Soomaliland looga qaadey?
Xasan Cabdi madar ayaa xuuraanka madaxtooyadu waxay ogaadeen ururinta buug uu soo saari doono oo taariikhdii Marxuum cigaal uu ka qori doono .
Madaxtooyada ayaa xasan looga yeedhay waliba qoyska madaxweynaha qaar ka mid ah ayaa waxay soo jeediyeen inuu qoro buug madaxweyne siilaanyo taariikhdiisa ah , xasana waxaba uma qarine waxaa uu usheegay iley wuu dareemay in la ogaadee inuu qorayo buug kale oo taariikhda madaxwynaha dhintey.
Markaa wuxuu usarbeebay in madaxweynuhu nool yahay , lakin markuu dhinto uu qori doono.
Madaxtooyada jawaabta lagama jeclaan , waxaana isla markiiba loo howl galey in la eryo xilka agaasimaha madaxtooyada iyadoon loo eegin yaa xasan badali kara madaama uu aha aqoonyahan macalin waxabadan oo waayo aragnimo ah ku fadhiya qarankan .
Daawo munaasibadii shalay lagu soo bandhigey buuga xasan qoray